Tian’Andriamanitra Hanao Ahoana ny Fiainantsika?
1. Inona no tian’Andriamanitra hatao ho an’ny olombelona?
ZAVATRA tsara be no tian’Andriamanitra hatao ho an’ny olombelona. Napetrany tao amin’ny zaridaina tsara tarehy i Adama sy Eva, ilay lehilahy sy vehivavy voalohany noforoniny. Tiany hiteraka izy ireo, sady hikarakara ny biby, ary hanova ny tany manontolo ho paradisa.—Genesisy 1:28; 2:8, 9, 15; jereo ny Fanamarihana 6.
2. a) Ahoana no hahalalantsika fa hotanterahin’Andriamanitra izay nolazainy? b) Iza no tiany hipetraka eto an-tany, ary mandritra ny firy taona?
2 Mbola ho lasa paradisa indray ve ny tany? Eny, satria hoy i Jehovah: “Efa nokasaiko izany ka hataoko.” (Isaia 46:9-11; 55:11) Tsy maintsy hotanterahiny izay nolazainy, ary tsy hisy hahasakana azy. Milaza i Jehovah fa “tsy hoe tsy misy antony ny namoronany” ny tany, fa tiany hipetrahan’ny olona. (Isaia 45:18) Iza no tian’Andriamanitra hipetraka eto, ary mandritra ny firy taona? Hoy ny Baiboly: “Ny olo-marina [na izay mankatò] no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”—Salamo 37:29; Apokalypsy 21:3, 4.
3. Inona ny fanontaniana hodinihintsika?
3 Betsaka anefa izao no marary sy maty, ary misy miady sy mifamono. Tsy tian’Andriamanitra ho hoatr’izany ny fiainantsika. Fa inona àry no nitranga? Ny Baiboly ihany no afaka manazava an’izany.
4, 5. a) Iza ilay nampiasa bibilava mba hiresahana tamin’i Eva? b) Ahoana no mahatonga ny olona iray ho lasa mpangalatra?
4 Milaza ny Baiboly fa manana fahavalo “antsoina hoe Devoly sy Satana” Andriamanitra. I Satana no tena niresaka tamin’i Eva tao amin’ny zaridainan’i Edena, fa bibilava no mody nataony niteny.—Apokalypsy 12:9; Genesisy 3:1; jereo ny Fanamarihana 7.
5 Andriamanitra ve izany no namorona an’i Satana Devoly? Tsia. Anjely iray no niova ka lasa Devoly. Tany an-danitra io anjely io rehefa nanamboatra ny tany Andriamanitra mba hipetrahan’i Adama sy Eva. (Joba 38:4, 7) Hoatran’ny olona iray lasa mpangalatra izany. Tsy hoe vao teraka izy dia mpangalatra. Mety hitsiriritra zavatr’olona izy aloha. Eritreretiny foana ilay izy, ka vao mainka tiany halaina. Angalariny amin’izay ilay zavatr’olona rehefa tsy misy mahita. Izy ihany no nahatonga azy ho mpangalatra.—Vakio ny Jakoba 1:13-15; jereo ny Fanamarihana 8.
6. Ahoana no nahatonga ny anjely iray ho lasa fahavalon’Andriamanitra?
6 Hoatr’izany koa io anjely io. Nasain’i Jehovah niteraka sy ‘nameno ny tany’ i Adama sy Eva. (Genesisy 1:27, 28) Mety ho nieritreritra ilay anjely hoe: ‘Raha izaho izao no hivavahan’izany olona be dia be izany fa tsy i Jehovah a!’ Izany foana no noeritreretiny ka vao mainka izy nitsiriritra, nefa i Jehovah ihany no tokony hivavahana. Nandainga sy namitaka an’i Eva àry izy. (Vakio ny Genesisy 3:1-5.) Izay no nahatonga azy ho Satana Devoly, ka lasa fahavalon’Andriamanitra.
7. a) Nahoana no maty i Adama sy Eva? b) Nahoana isika no mihantitra sy maty?
7 Tsy nankatò an’Andriamanitra i Adama sy Eva fa nihinana an’ilay voankazo. (Genesisy 2:17; 3:6) Nanota izy ireo, ka maty tatỳ aoriana. Izay mihitsy ilay notenenin’i Jehovah. (Genesisy 3:17-19) Mpanota koa ny zanak’i Adama sy Eva ka maty. (Vakio ny Romanina 5:12.) Ity misy ohatra manazava an’izany. Eritrereto hoe manao mofo ianao ary misy pempo ilay lasitra ampiasainao. Tsy maintsy manaraka an’iny daholo ny paozin’ny mofo mivoaka avy ao. Mitovitovy amin’izany ny mahazo antsika. Lasa mpanota i Adama rehefa tsy nankatò an’Andriamanitra. Mpanota koa isika satria zanany, ka mihantitra sy maty.—Romanina 3:23; jereo ny Fanamarihana 9.
8, 9. a) Inona no tian’i Satana hinoan’i Adama sy Eva? b) Nahoana no tsy tonga dia novonoin’i Jehovah i Adama sy Eva ary Satana?
8 I Satana no nanohitra an’i Jehovah voalohany. Nitaona an’i Adama sy Eva tsy hankatò an’Andriamanitra izy tamin’izay. Tiany hino i Adama sy Eva hoe mpandainga i Jehovah. Ratsy fanahy, hono, i Jehovah sady tsy mahay mitondra, ary tsy miraharaha an’izay hahasoa azy ireo. Nilaza izy hoe afaka manao izay tiany izy ireo fa tsy mila an’Andriamanitra hiteny hoe izao no tsara na izao no ratsy. Inona no nataon’i Jehovah? Azony novonoina teo no ho eo i Adama sy Eva ary Satana. Tsy hisy hanohitra azy intsony, amin’izay. Raha izany anefa no nataony, dia tsy ho fantatra mihitsy hoe mpandainga i Satana.
9 Tsy tonga dia novonoin’i Jehovah àry i Adama sy Eva ary Satana. Navelan’Andriamanitra hitondra ny fiainany ny olona. Ho fantatra tsara, amin’izay, hoe mpandainga i Satana fa i Jehovah kosa mitady izay hahasoa ny olona. Mbola hianarantsika izany any amin’ny Toko faha-11. Nety ve ny nataon’i Adama sy Eva, araka ny hevitrao? Rariny ve raha i Satana no nohenoiny fa tsy i Jehovah? I Jehovah ange no nanome an’i Adama sy Eva ny zava-drehetra e! Nataony lavorary izy ireo, ary nomeny toerana tsara tarehy sy asa tena nahafinaritra. I Satana kosa tsy nanome zavatra tsara azy ireo mihitsy. Inona no ho nataonao raha ianao no teo?
10. Inona ny safidy tsy maintsy ataontsika tsirairay?
10 Mila manao safidy koa isika tsirairay, hoe hankatò an’i Jehovah sa i Satana. Tianao àry ve ny hanaporofo fa mpandainga i Satana, fa i Jehovah no ho Mpitondra anao? (Salamo 73:28; vakio ny Ohabolana 27:11.) Miankina amin’izany no hahavelona anao.Vitsy ihany izao no mankatò an’Andriamanitra. Raha ny marina, dia tsy izy no mpitondra an’izao tontolo izao. Fa iza?
Raha tsy an’i Satana ve ny fanjakana rehetra eto an-tany dia ho azony nomena an’i Jesosy?
11, 12. a) Iza no mpitondra an’izao tontolo izao rehefa jerena ny tenin’i Satana tamin’i Jesosy? b) Inona avy ny andinin-teny miresaka an’izany?
11 Fantatr’i Jesosy hoe iza no tena mitondra an’izao tontolo izao. Nasehon’i Satana azy, indray mandeha, “ny fanjakana rehetra eo amin’izao tontolo izao sy ny voninahitr’ireny fanjakana ireny.” Hoy izy avy eo tamin’i Jesosy: “Homeko anao ireo rehetra ireo, raha miankohoka indray mandeha eto anatrehako ianao.” (Matio 4:8, 9; Lioka 4:5, 6) Raha tsy an’i Satana ve ireo fanjakana ireo dia ho azony nomena an’i Jesosy? An’i Satana àry ny fanjakana rehetra eto an-tany.
12 Mety hieritreritra ianao hoe: ‘Nahoana moa i Satana no hoe mpitondra an’izao tontolo izao? Fa angaha tsy i Jehovah no Andriamanitra Mahery Indrindra sady namorona an’izao rehetra izao?’ (Apokalypsy 4:11) Marina izany, nefa nilaza i Jesosy fa i Satana no “mpitondra an’izao tontolo izao.” (Jaona 12:31; 14:30; 16:11) Nantsoin’ny apostoly Paoly hoe “andriamanitr’ity tontolo ity” i Satana Devoly. (2 Korintianina 4:3, 4) Nilaza koa ny apostoly Jaona fa ‘izao tontolo izao manontolo dia eo ambany fahefan’ilay ratsy.’—1 Jaona 5:19.
HORAVANA NY TONTOLON’I SATANA
13 Vao mainka miharatsy izao ny fiainana. Betsaka no miady, manao kolikoly, mihatsaravelatsihy, ary mahery setra. Na miezaka mafy aza ny olona, dia tsy vitany ny mandamina an’ireo olana ireo. Horinganin’Andriamanitra anefa ity tontolo ratsy ity amin’ilay ady hoe Hara-magedona, ka hosoloany tontolo vaovao. Kely sisa izany dia hataony.—Apokalypsy 16:14-16; jereo ny Fanamarihana 10.
14. Iza no nofidin’i Jehovah ho Mpanjakan’ny Fanjakany? Inona no efa nolazain’ny Baiboly momba an’i Jesosy?
14 Nifidy an’i Jesosy Kristy i Jehovah, mba ho Mpanjakan’ilay Fanjakany any an-danitra. Efa ela ny Baiboly no nilaza fa ho “Andrianan’ny Fiadanana” i Jesosy, ary tsy ho rava mihitsy ny Fanjakany. (Isaia 9:6, 7) Nasain’i Jesosy nivavaka momba an’io Fanjakana io ny mpianany, hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!” (Matio 6:10) Hianarantsika ao amin’ny Toko faha-8 fa ny Fanjakan’Andriamanitra irery no hitondra ny tany. (Vakio ny Daniela 2:44.) Hataony paradisa ny tany amin’izay.—Jereo ny Fanamarihana 11.
15 Milaza ny Baiboly fa hisy “lanitra vaovao sy tany vaovao hitoeran’ny fahamarinana, ary izany no andrasantsika.” (2 Petera 3:13; Isaia 65:17) Ny olona mipetraka eto an-tany indraindray no antsoina hoe “tany” ao amin’ny Baiboly. (Genesisy 11:1) Ilay hoe “tany vaovao” hitoeran’ny fahamarinana àry dia ny vahoaka mankatò an’Andriamanitra sy ankasitrahany.
16. Hiaina firy taona ny olona, ao amin’ilay tontolo vaovao? Inona no tokony hataon’izay te hahazo an’izany?
16 Nampanantena i Jesosy fa ‘hiaina mandrakizay’ ny olona, ao amin’ilay tontolo vaovao. (Marka 10:30) Inona no tokony hataonao raha tianao ny hahazo an’izany? Mila mampihatra ny Jaona 3:16 sy ny 17:3 ianao. (Vakio) Andao hojerentsika hoe hanao ahoana ny fiainana rehefa ho paradisa ny tany.
17, 18. Ahoana no ahafantarantsika fa tsy hisy korontana intsony ary tsy hatahotra intsony ny olona?
17 Tsy hisy intsony ny olon-dratsy, ny ady, ary ny olona mahery setra. Tsy hisy ratsy fanahy intsony eto an-tany. (Salamo 37:10, 11) ‘Hampitsahatra ny ady hatrany amin’ny faran’ny tany’ Andriamanitra. (Salamo 46:9; Isaia 2:4) Ho feno olona tia an’Andriamanitra sy mankatò azy ny tany. Hiadana mandrakizay izy ireo.—Salamo 72:7.
18 Tsy hisy zavatra hampahatahotra intsony. Rehefa nankatò an’Andriamanitra ny Israelita taloha, dia narovany ka tsy natahotra mihitsy. (Levitikosy 25:18, 19) Tsy hisy hampahatahotra antsika koa any amin’ny Paradisa, na olona na zavatra hafa.—Vakio ny Isaia 32:18; Mika 4:4.
19. Ahoana no ahafantarantsika fa ho be dia be ny sakafo?
19 Ho be dia be ny sakafo. “Hahavokatra be ny tany, ary na eny an-tampon-tendrombohitra aza dia ho be ny vokatra.” (Salamo 72:16) “Hitahy antsika” i Jehovah Andriamanitsika, ka “hahavokatra tokoa ny tany.”—Salamo 67:6.
20. Ahoana no ahafantarantsika fa ho lasa paradisa ny tany?
20 Ho paradisa ny tany manontolo. Samy hanana trano sy zaridaina tsara tarehy ny olona. (Vakio ny Isaia 65:21-24; Apokalypsy 11:18.) Ho tsara tarehy hoatran’ny zaridainan’i Edena ny tany manontolo. Homen’i Jehovah daholo izay ilaintsika sy izay irintsika. ‘Hanokatra ny tanany’ izy, hoy ny Baiboly, ka ‘ho afa-po ny zavamananaina rehetra.’—Salamo 145:16.
21. Ahoana no ahafantarantsika hoe tsy hasiaka intsony ny biby?
21 Tsy hasiaka intsony ny biby ary tsy hampijaly biby ny olona. Tsy hanaikitra intsony ny biby. Na ny zazakely aza tsy hatahotra an’ireny biby masiaka amin’izao ireny.—Vakio ny Isaia 11:6-9; 65:25.
22. Hataon’i Jesosy ahoana ny marary?
22 Tsy hisy harary intsony. Nanasitrana olona maro i Jesosy tamin’izy teto an-tany. (Matio 9:35; Marka 1:40-42; Jaona 5:5-9) Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra anefa izy, ka ny olona rehetra mihitsy no hositraniny. Tsy hisy hiteny intsony hoe: “Marary aho.”—Isaia 33:24; 35:5, 6.
23. Hataon’Andriamanitra ahoana ny maty?
23 Ho velona indray ny maty. Nampanantena Andriamanitra fa olona an-tapitrisany no hatsangany amin’ny maty. “Hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina.”—Vakio ny Jaona 5:28, 29; Asan’ny Apostoly 24:15.
24. Tianao ve izany hiaina ao amin’ny Paradisa izany?
24 Manana safidy isika: Hianatra momba an’i Jehovah sy hanompo azy ve isika sa hanao izay tiantsika fotsiny? Raha mifidy ny hanompo azy isika dia hiaina ao amin’ny tontolo vaovao. Niteny tamin’ilay lehilahy efa ho faty teo akaikiny i Jesosy hoe: “Hiaraka amiko any amin’ny Paradisa ianao.” (Lioka 23:43) Andao isika hianatra momba an’i Jesosy, ka hojerentsika hoe inona no hataony mba ho tanteraka ireo zavatra tsara nampanantenain’Andriamanitra ireo.
HEVITRA 1: MISY ANTONY MATOA ISIKA NOFORONIN’ANDRIAMANITRA
“Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”—Salamo 37:29
Inona no tian’i Jehovah hatao rehefa namorona ny olona?
Tiany hiteraka ny olona ka hanova ny tany ho paradisa sy hikarakara ny biby.
Tsy maintsy tanterahin’Andriamanitra ny fikasany ary tsy hisy hahasakana azy.
HEVITRA 2: NAHOANA NO MIHARATSY NY FIAINANA?
‘Izao tontolo izao manontolo dia eo ambany fahefan’ilay ratsy.’—1 Jaona 5:19
Mpitondra an’izao tontolo izao i Satana, hoy i Jesosy.
Te hivavahana i Satana nefa i Jehovah ihany no mendrika an’izany.
Namitaka an’i Eva i Satana. Tsy nankatò an’Andriamanitra i Adama sy Eva ka maty.
Mpanota daholo isika taranak’i Adama ka maty.
Mamitaka ny olona i Satana.
HEVITRA 3: MILA NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA ISIKA
“Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao!”—Matio 6:10
Inona no hataon’i Jehovah?
Ny Fanjakan’Andriamanitra irery no hitondra ny tany.
Horavan’Andriamanitra ity tontolo ratsy ity amin’ny Hara-magedona.
Nifidy an’i Jesosy ho Mpanjakan’ilay Fanjakany i Jehovah. Hanjaka eran-tany izy.
HEVITRA 4: HANOVA NY TANY HO PARADISA ILAY FANJAKANA
‘Manokatra ny tananao ianao, ka afa-po ny zavamananaina rehetra.’—Salamo 145:16
Tsy hisy intsony ny ady sy ny olon-dratsy ary ny herisetra.
Samy hanana trano sy zaridaina tsara tarehy ny olona, ary tsy hatahotra intsony.
Ho be dia be ny sakafo.
Tsy hasiaka ny biby.
Tsy hisy olona harary, ary ho velona indray ny maty.
Izay Hataon’ny Fanjakan’Andriamanitra
Mampirisika ny olona eran-tany i Jehovah mba hiezaka hahafantatra hoe inona no hataon’ny Fanjakany ho an’ny olombelona amin’ny hoavy.
Hizara Hizara Inona no Tian’Andriamanitra Hatao ho An’ny Olombelona?
bhs toko 3 p. 29-39